कसले बुझिदिने यीनका पीडा
ज्योत्सना हरिजन २८ चैत ।
“जति धेरै दया माग्छौ त्यति नै घृणा पाउँछौ ।” समाज दिनप्रतिदिन अगाडी बढ्दो छ । विकासको क्रममा देश अगाडी बढिरहेको छ । सबै कुरालाई हामीले सहजै स्वीकार्दै पनि छौ । विश्वमा स्वीकार भएका चिजहरु पनि नेपालमा विस्तारै स्वीकार हुँदैछ । । कता कता यो यथार्थ पनि हो भने आजको दिनमा पनि हामी कतिपय कुरामा अझै पनि पछाडी छौ । म कुरा गर्दैछु यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा तेस्रोलिङ्गी समुदायको, पहिलोको, दोस्रोको भनेर भनेको होइन केवल नामांकनको लागी तेस्रो भनेको हो ।
तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गी, बाओसेक्सियुल र इन्टरसेक्सियुल जे भन्नुस हाम्रो समाजमा उहाँहरु मज्जाले हिड्नु, घुम्नु भएको छ र घुम्नु पनि पर्छ । कतिले यसलाई स्वीकारेका छन् । कतिले यसलाई कदापी हुँदैन् भनेका छन् भने कतिले स्वीकार्ने क्रममा पनि छन् । म महिला भए भन्दैमा पुरुषसंग आकर्षित हुनुपर्नेमा महिलासंग आकर्षित भएमा म मानव होइन भन्न चाहि कदापी मिल्दैन ।
त्यसै गरी म महिला भएर जन्मे र विस्तारै मेरो भित्र महिलाको शरीरमा पुरुषको मन छ भने र महिलाप्रति आकर्षित हुन्छ भने त्यो पनि गलत भएन । त्यो प्रकृतिले बनाएर पठाएको हो । त्यसलाई जति सहजै हामी स्वीकार छौ सायद त्यति नै राम्रो हुन्छ । किताबमा, संविधानमा, नीतिनियमहरुमा उनीहरुलाई सम्बोधन गरिएता पनि दैनिकीमा भने धेरै समस्याहरु भोगिराख्नु परेको छ ।
उनीहरुसंग पनि क्षमता छ, उनीहरु पनि मानव हो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उनीहरु पनि एउटा नेपाली हो । उनीहरुसंग पनि समाज र देशको सकारात्मक परिवर्तन गर्ने, आफ्ना परिवार र राष्ट्रको गरिमा उच्च राख्ने क्षमता छ । तर के हामीले ती अल्पसंख्यकमा रहेका यस समुदायलाई यो अवसर दिइएका छौ ? राज्यले दिएको छ ? यस समुदायलाई अगाडी र खुलेर आउन के कुराले रोकिरहेको छ त ? यो लेख यही विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक धेरै संख्यामा छन् तर उनीहरु समाजमा खुल्न चाँहदैनन् । खुल्न पनि त्यति सजिलो छैन । समाज अनि परिवारले गर्ने विभेद, तिरस्कार र हिंसाको डरले आफ्ना इच्छा र चाहना लुकाएर राखेका छन् । पहिचान अनुसारको नागरिकता पाएका छैनन् । केहीले मात्र लिंगको महलमा अन्य लेखि नागरिकता पाएका छन् । अन्य भनेर नागरिकता लिन पनि सहज भने पक्कै छैन । विभिन्न खाले मेडिकल रिर्पोटको माग गरिन्छ । म एक महिला हो ।
मेरो भित्र पुरुषको भावना छ । अब यसको मेडिकल रिर्पोट कुन चाहिं प्रविधिले निकाल्न सक्छ । मौलिक हक र कर्तव्यको धारा २३ को उपधारा २ ले लिंगका आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनेको छ । त्यस्तै सोही धाराको उपधारा ३ मा अल्पसंख्यकमा रहेकाहरुलाई विशेष सुविधा राज्यबाट प्रदान गरिने भनेर भनिएतापनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस्तै तेस्रोलिंगी र समलिङगीको कुरा कहीकतै उठेता पनि अन्तरलिंगीको कुरा भने अझै उठ्न सकेको छैन । अन्तरलिंगीको बारेमा केही अनुसन्धानहरु भने भएको छ ।
जसमा व्यक्ति जन्मदा यौनाङ्गहरु स्पष्ट नभएको र कतिपय व्यक्तिको किशोर अवस्थामा पुगे पछि जन्मेको यौनाङ्गहरु भन्दा फरक शारीरिक विशेषता भएको देखिन्छ । नागरिक भएर पनि अनागरिक भएर बाँच्नुपर्ने यी अल्पसंख्यकमा रहेकाहरुको समस्या कसले बुझिदिने त ? छक्का, हिजडा, मामु, श्रीदेवी, कान्छी जस्ता शब्दले सम्बोधन गरिने हाम्रो समाज विकसित त भएको छ, तर परिवर्तन भने पक्कै भएको छैन ।
केही फरक हाउभाउको कारण सधै भेदभावपूर्ण व्यवहार र तिरस्कार सहनुपर्ने, आफु भित्र रहेका भावनालाई गुम्साएर राख्नुपर्ने । कतिपय अवस्थामा उनीहरु मानसिक तनावमा आएर घरबाट भाग्ने, लागुऔषध सेवन गर्ने र आत्महत्या गर्ने जस्ता कदमहरु उठाउन बाध्य हुन्छन् । यस फरक यौनिकता भएका समुदायलाई हिन भावनाले हेर्ने मात्र होइन अक्सर जुल्म पनि गरिन्छ ।
जुन चिजको सुरुवात आफ्नै घरबाट हुने गर्दछ । यस्तै तमाम घृणा सहेर कयौंको जिन्दगी वितिरहेको अवस्था छ । त्यही भएर खुलेर आउन चाहनेहरु पनि गुम्सिन बाध्य छन् । कानूनी मान्यता नभएको कारण पनि खुलेर अगाडी आउन डराउँछन् । कतिपय परिवारमा स्वीकार भएतापनि समाजले अस्वीकार गर्ने डरले पनि खुल्न हिच्कीचाइरहेका छन् । त्यस्तै केही प्रतिशत खुलेर आएकाहरुको लागी पनि अवसर छैन ।
पेट पाल्न पनि कठिन छ । केवल सेक्सुवल ओरेन्टेशन फरक भयो भन्दैमा छुट्टै दृष्टिकोणले हेर्ने अनि अवसरबाट वञ्चित गरिने । सहजै कही जागिर नपाउने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, यो समुदाय । निल हिरा समाज नामक संस्था बाहेक अन्य कही रोजगार पाएको अवस्था छैन । त्यसैले कोही रोजगारको लागी भारत जान्छन भने कोही यौन पेशामा संलग्न हुन बाध्य भएका छन् ।
त्यस्तै यौन पेशा गरेको देख्ने समाजले त्यो गर्नुको पछाडीको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा जान्न ईच्छुक हुँदैनन् । मान्छेले यौन पेशा किन गर्छन खानको लागी, बाँच्नको लागी, भोको पेट पाल्नको लागी, पैसाको लागी, काम गर्न दिनुप¥यो काम नदिए जाने कहाँ त मान्छे बाध्य भएर यस पेशा अपनाउने गरेको छन् । त्यस्तै यौन पेशामा महिला पनि जान्छन् । पुरुष पनि जान्छन् ।
तर आँखाको तारो सधै तेस्रोलिङ्गीहरु नै पर्दछन् । कानुनले भन्छ समलिङ्गी यौन सम्बन्ध अप्राकृतिक हो । कानूनको नजरमा यो उचित छैन । संविधानको हक हरेक नेपालीको हो । दुई व्यक्तिको बीच आकर्षण र चाहना छ अनि सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा बालिग छन भने समलिङ्गी यौन सम्बन्ध अप्राकृतिक कसरी ? सवाल यो उठ्छ के मेरो शरीरमा मेरो अधिकार छ वा छैन ?
यो कुनै रोग होइन प्रकृति हो । जन्मजात हो । यसमा कसैको गल्ती हुँदैन । न जन्म दिने माता पिताको न बच्चाको न त पालनपोषणको कारण त्यही पनि कति माता पितालाई लाग्छ कि यो कुनै रोग हो अनि उहाँहरु चिकित्सककोमा उपचारको लागी लानु हुन्छ । कतिपय चिकित्सकले कयाै‌ प्रकारको दिमागमा इलेक्ट्रोनिक सट पनि लागाउने गरेका कयौं उदाहरण पनि छन् । त्यस्तै न सटले, न औषधी उपचारले, न संगतले, न योगले । यो बिमारी नै होइन यो त प्राकृतिक चीज हो यसलाई परिवर्तन गर्न सकिंदैन । उनीहरु पनि आमाकै पेटबाट जन्मिएका हुन् जसरी अरु बच्चाको जन्म हुन्छ ।
लामो समय देखि हाम्रो समाजमा एक तप्कालाई हामी टर्चर गर्दै आएका छौ । विभिन्न समस्या दिइरहका छौं । उनीहरुको मजाक बनाइरहेका छौं । उनीहरुको भावनालाई सधैं ठेस पु¥याइरहेका छाै‌ । उनीहरु मानव हुनुमा हामी सवाल उठाइ रहेका छौ, के अधिकार छ हाम्रो ? यो शोभनिय कुरा होइन । मलाई लाग्छ अब समय आइसकेको छ कि उनीहरुको सपनालाई साकार गर्ने जसको सपना हामी जस्तै छ ।
भावना हामी जस्तै छ । डर पनि हामी जस्तै छ । उनीहरुलाई अपनाउ र संगै साथमा लिइ अघि बढौं याद राख्नुस यो प्राकृतिक कुरा हो । कुनै बिमारी होइन । यो जन्मजात हो कुनै इच्छा अथवा निर्णय गर्ने कुरा होइन । सायद म या तपाई पनि यो अवस्थामा जन्मन सक्थ्यौ । त्यस कारण मन देखि डर हटाउनुस अनि प्रकृतिको यो सुन्दर उपहार स्वीकार गरौं । जसले गर्दा तपाईलाई धेरै सहयोगी हातहरु मिल्नेछ ।